Wasiirka Imaaraatka Carabta oo taageeray hadaladii Emmanuel Macron ee Muslimiinta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka Imaaraatka Carabta oo taageeray hadaladii Emmanuel Macron ee Muslimiinta
Anwar Gargash ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha Faransiiska ee ah inuu doonayo inuu ka reebo muslimiinta.
Wasiiru Dowlaha Arimaha Dibada ee Imaaraatka Anwar Gargash ayaa sheegay in Muslimiinta Reer Galbeedku ‘u baahan yihiin in si wanaagsan looga dhexgalo’ p
Wasiir caan ah oo ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa ugu yeeray Muslimiinta inay aqbalaan mowqifka Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ee ku aadan sheegashadiisa ku saabsan baahida loo qabo “isdhexgalka” bulshada reer Galbeedka.
“[Muslimiinta] waa inay si taxaddar leh u dhageystaan ​​waxa Macron ku yiri khudbadiisa. Ma doonayo inuu go’doomiyo Muslimiinta Galbeedka, waana uu saxan yahay gebi ahaanba, “ayuu yiri Anwar Gargash, wasiiru dowlaha arrimaha dibedda, wareysi uu Isniintii siiyay wargayska Jarmalka ka soo baxa ee Die Welt.
“Dawladda Faransiisku waxay xaq u leedahay inay raadiso siyaabo lagu gaaro tan iyada oo lala barbar taagan yahay la dagaallanka xagjirnimada iyo xirnaanshaha bulshada,” ayuu raaciyay.
Gargash wuu diiday eedeymaha loo soo jeediyay madaxweynaha Faransiiska ee ah inuu doonayo inuu ka reebo muslimiinta ku nool Faransiiska.
‘Xorriyadda wax lagu sawiro’
Hadalka wasiirka Imaaraatka ayaa imanaya xili ay soconayaan mudaharaadyo ka socda dunida carabta iyo muslimiinta oo looga soo horjeedo hadalada Macron ee ku saabsan diinta islaamka, mudaaharaadkaas oo uu ku eedeyay muslimiinta “gooni u goosad” isla markaana uu difaacay daabacaadda kartoonadii muranka dhaliyay ee nebi Muxamed.
Ka dib ololeyaal qaadacaad ah oo xoog leh oo ku saabsan wax soo saarka Faransiiska guud ahaan dunida Carabta iyo Muslimiinta, Macron ayaa hoos u dhigay codkiisa wuxuuna sheegay inuu fahamsan yahay dareenka Muslimiinta ee ku saabsan kartoonada.
“Waan fahamsanahay dareenka la muujiyay waana ixtiraamayaa,” ayuu yiri madaxweynaha Faransiiska oo wareysi gaar ah siiyay Al Jazeera Sabtidii.
“Laakiin waa inaad fahamtaa kaalinteyda hadda, waa in la sameeyo laba arrimood: si kor loogu qaado xasilloonida iyo sidoo kale in la ilaaliyo xuquuqdan,” ayuu yiri Macron.
“Waxaan marwalba dalkayga ka difaaci doonaa xorriyadda hadalka, wax qorista, ka fikirka, iyo sawir-qaadista,” ayuu raaciyay.
Previous articleUAE minister backs Emmanuel Macron’s remarks on Muslims
Next articleOne day from the US elections: What you need to know
Xeerilaaliyaha Etoobiya oo sheegay in Etoobiya noqoneynin sida Soomaliya u fashilantay...
Xeer ilaaliyaha Itoobiya oo goor dhaweed saxaafada la hadlay ayaa yiri : TPLF waxa ay rabtay in Itoobiya ka dhigaan dal sida Somalia oo...
Madaxweyne Ramaphosa Oo Shacabka La Hadley❓